Mahajanga Vehivavy iray nendahina lehilahy roa
Vehivavy iray no nendahina lehilahy roa ny alin’ny 31 Janoary lasa teo tany Mahajanga. Lasan’ireto farany tamin’izany ny firavaka sy finday saingy teny am-pitsoahana indrindra izy ireo no saron’ireo polisy nanao fisafoana
nivoaka ny elakelatrano ka noraisim-potsiny. Mbola tratra teny amin’izy ireo ny finday sy firavaka izay vao avy nangalariny. 25 sy 26 taona moa izy roalahy ireto izay fantatra fa nanao tery vay manta nisintona ilay firavaka teny an-tendan’ilay vehivavy mihitsy. Mahatsiaro ho sahirana ireo mponina ao Mahajanga noho izany. Miha mahazo vahana indray mantsy ny tsy fandriampahalemana any an-toerana izay marihina fa andro aman’alina mihitsy.
Legende : Ireto izy roalahy sy ilay firavaka avy nangalariny
Antohomadinika Manendaka sady mamono mahafaty ireo olon-dratsy
Tena faritra mena amin’ny asa fanendahana ny eny Antohomadinika. Tsy vitan’izay very fananana ireo lasibatra fa mbola voavono ihany koa toy ny nahazo ny lehilahy iray nandalo teny an-toerana ny marainan’ny 25 jona lasa teo.